Bhenefiti yegore komputa yeCommerce | ECommerce nhau
Bhenefiti yegore komputa yeCommerce
Iyo ipfungwa ine hunyanzvi iri kupaza matekinoroji matsva uye nekuwedzera yakanangana nekutengeserana kwemagetsi. Nekuti zvirizvo, ecommerce gore komputa inonyanya ine mukana wekupa services pamusoro peInternet. Ndokunge, uko gore komputa iri tekinoroji nyowani inotsvaga kuve neyedu mafaera neruzivo paInternet, pasina kunetseka nezvekuve nekwanisi inokwana yekuchengeta ruzivo pakombuta yedu.
Mukuita, iyo inonzi gore komputa ecommerce ine zvakakosha zvakanyanya kune izvo zvigadzirwa, masevhisi uye zvinyorwa zvinoendeswa kubva kuchitoro chedigital kana commerce. Nenzira yekuti inogonesa matsva matsva ayo kupinda pakati pevatengi kana vashandisi uye kuti ivo vanopindura kune epamberi epamberi ekushambadzira nongedzo kubva kune ese maonero maonero Kusvikira pakuti izvo zvinogona kutaurwa pasina kutya kuve wakakanganisa kuti iyi pfungwa ichangoburwa inoita referensi yekutengesa zvemagetsi.
Kubva pane ino maonero akawandisa, zvinogona kuonekwa kuti ruzivo rwese, maitiro, data, nezvimwe, zviri mukati meinternet network, segore, kuti munhu wese akwanise kuwana ruzivo rwakazara, pasina huremu hwakakura. Saka kuti nenzira iyi, ivo vari muchimiro chakajeka chekutenga kuburikidza neyakajeka musiyano wekushambadzira uyo unopa akawanda matsva maficha zvine chekuita nezvimwe.
1 Cloud computing ecommere: zvako zvakanaka
2 Mimwe mipiro yakapihwa neiyi sisitimu
3 Cloud komputa masevhisi
4 Mhando dzegore komputa
5 Zvinhu zvekufunga nezvazvo
Cloud computing ecommere: zvako zvakanaka
Iyi yekushambadzira sisitimu inoonekwa pamusoro pezvose nemutengo wayo wakaderera uchienzaniswa nemamwe maitiro akajairika kana echinyakare masisitimu. Iko kushanda kuri pamusoro pezvose pasi penzira iyo pasina chikonzero ita mari muzvivakwa zvikuru, kana marezenisi erudzi chero rupi zvarwo. Mune mamwe mazwi, inodhura zvakanyanya kubva kune yezvehupfumi maonero sezvo isina mari yekuwedzera yechero hunhu.
Chengetedzo ndeimwe yemipiro yayo mikuru sezvo uchifanira kufunga kuti iyo data inofamba nepakati pegore ichagara yakachengeteka, kunyangwe mumamiriro akashata kwazvo evashandisi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwe uchave uine vimbiso yakakwana yekuti iyo data haizoenda kune vechitatu mapato chero nguva mukuita.
Ehe hapana chikonzero chekuve neakakura ekuchengetedza masimba. Iyi ndiyo imwe yemakiyi ekutsanangura kuti Cloud computing ecommerce inosanganisira chii. Semukana wakanakisa kana zvasvika pakuchengetera uye izvo zvinotsanangura kuti sei vanhu vazhinji vasarudza ino system mumwedzi ichangopfuura.
Asi kana paine chimwe chinhu chinoratidza ecommerce Cloud komputa panguva ino, imo nekuti inopa ruzivo munguva chaiyo. Ichi chinhu chakakosha chinogadzira icho chauinacho kuwana ruzivo neimwe kumberi ichienzaniswa nemamwe mamodheru akafanana neiyi. Nebudiriro mukupa ruzivo rwunogona kuve rwakakosha zvikuru kune e-commerce kubva kune ese maonero maonero.
Mimwe mipiro yakapihwa neiyi sisitimu
Nekunge paine mabhenefiti mazhinji atakatsanangurira kwauri kare, havazi ivo chete, asi zvinopesana, mamwe anogoneswa ayo anogona kunakidza kwazvo kana iwe uri muridzi wechitoro chepamhepo kana bhizinesi. Cone mune kesi dzatichazokufumura pazasi:
Muzviitiko zvese, iwe unogona kuwana chero nguva uye chero kwaunoda sezvo iwe uchingoda chete Internet kubatana. Pasina zvimwe zvehunyanzvi zvinodiwa izvo zvinogona kuve zvakanyanya kuomarara mukushandisa kwayo. Kusununguka kwaunofanira kupinda mune ino yekutaurirana system hapana mubvunzo chimwe chezvakakura zvinokurudzira zvekuhaya. Kubva chero kupi iwe uine hukama hwakanaka kune iyi yekutaurisa chiteshi.
Kana izvo zvaunoda zviri izvo kupinda kune ruzivo rwese Iwe haufe wakambozeza kuti ecommerce gore komputa ndiyo system yaunofanirwa kusarudza kubva zvino zvichienda mberi. Izvo hazvikupe iwe matambudziko mazhinji uye kune rumwe rutivi mabhenefiti anozove akakosha kana uchienzaniswa nemamwe marudzi esarudzo mune ino chikamu. Iko iko kunonyanya kubatsirwa pasina mubvunzo kuri kwako kwemagetsi commerce.
Iwe zvakare uchave mune zvese zviitiko nekukurumidza basa uchivakirwa pawebhu. Ichi chinhu chinogona kusarudzika kana uchiita mamwe mabasa muchitoro chako chepamhepo. Kunyangwe kuchengetedza hukama nevatengi kana vashandisi vekambani yako, sezviri kuitika panguva ino.
Uye pakupedzisira, haugone kukanganwa chokwadi chekuti gore komputa muecommerce haidi kudyara kukuru. Kana zvisiri, pane kudaro, pane akakwana margins anogona kuve anoshivira kusangano rako. Chero zvazviri, haufanire kukanda imba kunze kwehwindo kuti utaure nezve ino sisitimu yakakosha sezvo iri yekuvandudza.
Cloud komputa masevhisi
Ipuratifomu sevhisi inopa mushandisi zvishandiso zvinodiwa kuti aite zvigadzirwa zvemakomputa, nekudaro kugona kugadzira mashandisiro uye zvidimbu zve software usinga danidzi maturusi aya pakombuta. Pakati pezvakanaka zvacho kuponeswa kwekuwana marezinesi ekuvandudza maturusi uye zvakare hapana chikonzero chekushushikana nezvekuchengetedza kwavo, nekuti sevhisi pachayo inotarisira kugadzirisa kwavo.
Nepo kune rimwe divi, iwe unofanirwa kupokana nenyaya yekuti kune akasiyana mamodheru zvichienderana ne wega izvo zvinodikanwa uye kuti isu tinokufumura iwe pazasi kuitira kuti uve nazvo zvishoma kujekesa kubva zvino zvichienda mberi.
Chimwe chezvinyanyozivikanwa ndicho chinonzi npachena ube kuna vandinoziva kuwana masevhisi nenzira yakagovaniswa. Kuti ivo vari kuruzhinji hazvireve kuti ivo havana kuchengetedzeka.
Imwe yemafomati iwe aunogona kutora ndiyo nzvakavanzika ube uye kuti mune ino kesi inoratidzirwa nenyaya yekuti mushure mezvose Iro gore rekushandisa chete uye zvakavanzika.
Nepo chechitatu ichiwanika kune vashandisi iyo nmusanganiswa ube. Zviri nezve modhi yakaoma kunzwisisa ine hunhu hwemhando dzakapfuura. Asi pamwe neiyo yekuwedzera kukosha iyo iyo inokutendera iwe kuti uite musanganiswa seimwe chikamu chebasa iri yakavanzika uye imwe yakagovaniswa.
Mhando dzegore komputa
Kune zvakare mafomati akati wandei maunogona kusarudza yako yaunoda system uye mune mamwe maitiro akaomarara anopinda mukuwongorora kwavo. Isu ticha taura zvimwe zvezvakanyanya kukodzera kuti iwe ugone kuwana zvishoma pfungwa yezvaunogona kuwana mumhando dzegore komputa.
Zvivakwa seSevhisi (IaaS): Ndiyo sarudzo yakanakisa yemaseva kana yekuchengetedza.
Software seSevhisi (SaaS): inobatsira chaizvo kana uchizoshandisa webhu-based email seyishandiso yebasa.
Platform seSevhisi (PaaS): kubva kwaunogona kugadzira yako webhusaiti kubva electronic commerce, asi iwe une zvese, kusanganisira yekutengera ngoro, Checkout, kutumira, uye nzira yekubhadhara inomhanya pane server yemutengesi.
Zvinhu zvekufunga nezvazvo
Sekupfupisa, uye kunyatso kujekesa pamusoro peiyo gore komputa inoreva mune ecommerce, hatizomboita sarudzo asi kupfupisa imwe yemipiro iyo ino manejimendi system inogona kutipa isu. Semuenzaniso, mune zvimwe zvezviitiko zvinotevera zvatichafumura pazasi:
Iyo sisitimu iyo inotibvumidza isu kuti tirambe takavanzika muhukama hwedu uye iyo inowana kukosha kwakakosha munguva dzinonetsa mune dzino nguva sezvavari nhasi. Iko iyo kuchengetedzwa kwedata redu uye ruzivo pamusoro peimwe nhevedzano yezvakakosha zvekufunga zvakanyanya kukosha kupfuura iyi.
Iyo ndeimwe yemaitiro akanakisa ekusvitsa masevhisi nenzira yakagovaniswa. Mune izvo zvakagadziriswa seimwe yezviitiko kana maitiro atanga kuve akadaro mumwedzi ichangopfuura. Kusvikira padanho rekuti data uye manejimendi ruzivo zvinogona kutariswa izvo zvinonyanya kuchinjika pane zvimwe zvese.
Izvo zvakanyanya kuomarara kuita nekuda kwehunhu hwayo hwakakosha uye ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei gore komputa muecommerce ichida kudzidza kwakawanda. Mune zvimwe zviitiko nemwedzi mishoma iri pamberi uyezve kutangazve neiyi nyowani nzira. Usarambe kana iwe ukasabata iwo marongero avo pakutanga mukuita.
Iyo inogona kuve imwe yeanoshanda uye anobatsira marongero ekuita mamwe mabasa muchitoro chako kana kudhijitari commerce. Nedzakateedzana mabhenefiti angave akakosha kwazvo kuita kuti bhizinesi riwane purofiti kubva pane nyowani uye nehunyanzvi maonero
Uye pakupedzisira iwe unofanirwa kuziva kuti iyi pfungwa iri mukuzara kuzere nekuti iri kugara ichishandurwa neayo akakosha hunhu. Iwe unofanirwa kuve nekuziva kwazvo zvese zviri kugadzirwa nenhau dzichangoburwa dziri kugadzirwa muchikamu ichi sezvo zvagara zviri mumwedzi yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Bhenefiti yegore komputa yeCommerce
Maitiro ekushandisa sei iyo RGPD kune yemagetsi commerce?
Kurumidza kukwereta kukudziridza yako e-commerce